Ny 'ego' no programa AI izay mameno ny fiaramanidina amin'ny bio-robot an'ny olombelona: Martin Vrijland
Iza io lahatsoratra momba ny olona tsy misy dikany (NPCs) dia mety efa nahatakatra fa ny teny hoe "fahatsiarovan-tena" na "fanahy" dia azo oharina amin'ny fifandraisana am-bava eo amin'ny atidoha atidoha miaraka amin'ny avatar amin'ny simulation. Ny avatar ao amin'ny simulation dia, araka ny voalaza, dia mifehy avy any ivelany ary noho izany dia nentanim-panahy. Tao amin'io lahatsoratra io dia niresaka fohifohy momba ny programa AI izay mitantana ny atidohan'ny avatar aho. Amin'ity lahatsoratra ity dia te hamolavola izany aho. Ny lohateniny dia mamadika ny fomba fijeriko amin'izao: Ny 'ego' dia programa AI izay feno ao anaty fiaramanidina boto-robot an'ny olombelona-avatar. Avelao aho hanazava bebe kokoa etsy ambany.
Raha mihevitra isika fa ny vatantsika olombelona (anisan'izany ny atidoha) dia avatars amin'ny simulation, dia misy tsipika any amin'ny toerana iray miaraka amin'ny mpilalao voalohany; izay antsointsika hoe fitaomam-panahy. Ao amin'ny lahatsoratra mifandraika dia nanazava ihany koa aho fa maro ireo avatars (NPCs) mandehandeha manodidina. Noho izany ireo dia avatars izay tsy miasa ivelany. Kanefa ireo olona ireo dia afaka mahatsapa tanteraka ny fihetseham-po rehetra, manatanteraka fomba fijery miavaka tsara (fianarana, manao asa, etc.) ary afaka mankafy ny zavakanto sy ny mozika. Ao amin'io lahatsoratra io dia nanao fampitahana ihany koa aho tamin'ny robots avy amin'ny tambajotra Netflix 'Real Humans' ary niresaka momba ny horonantsary Transcendence. Noho ny mahamety azy, andeha hojerentsika fa ny fahaiza-misaina (AI) dia hahatratra ny haavon'ny 'hevitry ny olombelona' amin'ny hoavy tsy ho ela. Dia afaka manome robot iray atidoha ianao ary tsy misy olona afaka hahita ny fahasamihafana amin'ny 'olona tena izy' intsony.
Mety ho sarotra ho an'ny mpamaky ny salan'isa ny mahita fa miaina ao anaty simulation isika, satria ny zava-bitantsika, ny mahita, ny fofona, ny mandre ary ny tsiro dia tena azo iainana. Tena tsy fifankazahoana izany. Raha mikopakopaka amin'ny mikrosopopy ambony eo amin'ny seza izay ipetrahanao ianao na eo amin'ny latabatra ao ambadik'ity vakinao ity, dia mifarana amin'ny habakabaka feno eo amin'ny singa tsirairay amin'ny molekiola sy ny atôma izay mamorona azy. Ary raha manao fanandramana ara-batana ianao (ny fanandramana indroa), dia hita fa tsy misy afa-tsy raha misy mpandinika iray. Izany dia mampahatsiahy ny lelafo VR, izay tsy misy ny tontolo ao ambadikao, raha mbola tsy mamadika ny lohanao any ianao. Ao anatina simulation maro mpilalao dia tsy maintsy mifandray ihany koa ny fijerena ny mpilalao tsirairay. Ilaina ny mamantatra lalindalina kokoa amin'ny fanazavana an-tserasera ao ambadik'ilay simulation, amin'ny fandehanana amin'ny 'ny simulation' eto amin'ny tranokala ary ny mianatra hahatakatra ny teoria ao ambadika.
Raha heverinao fa mitandrina ny simulation ianao, noho izany, tsy ianao ny maha-avatar anao (ny vatanao amin'ny atidoha), fa ianao no mpilalao ivelany izay mitandrina sy milalao ity simulation amin'ny alàlan'ny avatar olombelona. Ny toerana misy ahy dia noho izany dia maro ireo avaratry ny olombelona mandeha manodidina izay tsy manana fanaraha-maso ivelany ary tsy misy mpandinika ivelany / mpilalao. Amin'ny tranga rehetra anefa, ny mombamomba ny olombelona dia tena manan-tsaina. Io fahagagana io dia toy ny hoe natao ho an'ny atidoha biolojika. Ny programa fototra dia efa ao anaty ADN ary nafindra tamin'ny alàlan'ny fomba fanoratana ny avatars (ny fizotry ny fandinihan-tena, ny fitondrana vohoka ary ny fahaterahana) mankany amin'ny avatar manaraka. Ny fandaharana voalohany momba io atidoha io dia amin'ny alalan'ny avon'ireo ray aman-dreny sy amin'ny alalan'ny fandaharam-pandrafetana amin'ny alàlan'ny zavatra rehetra izay manaisotra ny fahatsapan'ny avatar. Ny dingana famolavolana programa dia noraisin'ny fiarahamonina.
Ity programa momba ny ati-dohan'ny atidoha AI ity dia avo lenta loatra ka toa toa ny fampidiram-peo tsara indrindra hihaino. Izany no antsointsika hoe "ego" amin'ny psikology malaza. Tiako ny miantso azy io ny programa AI izay mifehy ny bio-avatar.
Satria isika dia voahodidin'ny mpilalao olombelona miaraka amin'ny programa AI mafy sy mahatalanjona ary mahita ny fahombiazan'ireny avatars ireny ho toy ny làlan-dàlana avo kokoa, aleontsika mandray ny dingam-pandrindrana sy ny AI ao amin'ny biobrain ho anjara andraikitra mba hanatanterahana ny fiainantsika.
Na izany aza, raha mitadidy foana isika fa ny programa AI dia avy amin'ny mpanamboatra an'io simulation io (na dia toa mianatra misimisy kokoa aza ny fahatsapan'ny olona ao amin'ny AI) dia hianatra hanavaka ny fanapahan-kevitra izay mamorona ny avatar avatar mifototra amin'ny programa AI na fanapahan-kevitra mifototra amin'ny fifandraisana am-panahy tsy manam-paharoa amin'ny 'tena tany am-piandohana'.
Azonao atao ny miady hevitra fa ny programa AI ao amin'ny atidoha avatar-bio dia mety ho tsara kokoa ny mandray fanapahan-kevitra tsara ao anatin'ity simulation ity, nefa dia mihevitra ianao fa ny 'mpilalao voalohany' dia tsy ho hendry na tsy hanana ny fijery. Andeha hojerentsika fa ny mpilalao dia manana fijery tsara kokoa (afaka manara-maso ny kianja filalaovana tanteraka) ary afaka mandray fanapahan-kevitra tsaratsara kokoa. Moa ve tsy tsara kokoa ny mandingana ny fandaharan'asan'ny AI ao amin'ny atidoha avatar-bio (sy ny programa izay mihidy ao amin'ny ADN)? Moa ve tsy tsara kokoa ny mihaino ny fifandraisana amin'ny fanahy indray ary matoky izany?
Sarotra izany, satria ny programa AI dia faly maka ny fitantanana hatrany hatrany. Raha toa ka tsy voafehy ny ankamaroan'ny mponina manodidina anao ary noho izany dia miaina ao amin'ny programa AI izy, dia ho tianao ny hisafidy tanteraka ny programa AI anao. Raha ny marina, efa nomanina hatramin'ny ela ianao - indrindra raha toa ianao manana an'io fifandraisana tsy misy fanahy io - tsy hihaino izany fifandraisana izany. Hisy programa hihaino ny programa biolojika ao amin'ny atianao. Ny programa momba ny ati-bio-brain ao amin'ny atianao dia efa voaofana hatramin'ny fahazazanao ary ianao (ny avatar anao) dia nomena valisoa na sazina tao anatin'ity dinganin'ny fiofanana ity. Izany no atao hoe rafitra fanabeazana ary izany no mahatonga antsika hahita ity rafi-panabeazana ity manomboka amin'ny fahatanorana mbola kely.
Zava-dehibe àry ny hamerenanao ny fifandraisana amin'ny fanahy tsy miangatra aminao ary amin'izay dia zava-dehibe ny mamela ny fifandraisana amin'ny fanahy tsy misy filaharana mba hifehy. Ny programa AI izay mitantana ny bio-avatar dia mahatonga anao hieritreritra fa zava-dehibe io simulation io. Miezaha hahafantatra fa milalao sy mihaino ianao ny voalohany Amin'ny alàlan'ny fifandraisana am-panahy tsy misy aina!
Ny orinasan'i Elon Musk ao amin'ny Neuralink dia ho avy mivantana avy any DARPA (toy ny Internet sy smartphones)
Tags: ai, Avatar, hambom-pon'ny, Featured, tsaina, fandaharana, simulation, fifandraisana amin'ny fanahy
11 Jolay 2019 ao amin'ny 13: 17
Echoes na Genesis
Na izany aza, misy ny peratra mahazatra amin'ny hevitra hoe misy mpanamboatra, na mpamorona, izay miahy antsika. Toy izany koa, ny fiheveran'ny olona ambony izay mamorona universe simulated dia manondro ny hevitry ny andriamanitra iray mamorona izao tontolo izao - ohatra, araka izay voafaritra ao amin'ny bokin'ny Genesisy.
11 Jolay 2019 ao amin'ny 13: 27
Amin'ity tranga ity, tsy heveriko fa ny mpanorina ity simulation ity dia "miahy antsika". Jereo ny lahatsoratra eo ambanin'ny rohy farany ao amin'ny lahatsoratra.
Ny fepetra noraisin'ny teôlôjika simulation amin'ny lafiny iray dia tsy maintsy atao amin'ny fanirian'ny olona hampidina ny tokonam-baravarana mba hanentanana ny zanak'olombelona ny singan-dehilahy ao amin'ny lisi-pandrosoana Losifera AI: amin'ny rafitra virosy
11 Jolay 2019 ao amin'ny 13: 29
Indray mandeha, ny fanangonam-pahefana amin'ny alalan'ny fanodikodinam-piasa dia manana ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao. Ampijaliana ara-panahy fotsiny izahay.
11 Jolay 2019 ao amin'ny 14: 27
Ny avatar AI olombelona dia sahirana amin'ny fananganana sehatra vaovao miaraka amin'ireo avatars izay afaka manao tahaka ny avatar ankehitriny:
Ny Sampan-draharahan'ny fiarovana ny fiarovana ny Advanced Research Project ao amin'ny Machine Common Sense, izay mikendry ny hamolavola ny fahatsapan'ny olona amin'ny ambaran'ny zaza 18-volana. Mansinghka dia iray amin'ireo mpanadihady fototra amin'ity tetikasa ity.
11 Jolay 2019 ao amin'ny 14: 30
Ny fomba farany hahatonga anao hanadino ny fifandraisana amin'ny fanahinao dia ny fananganana simulation ao anatin'ny simulation.
Ary raha azonao atao ny mino ny mombamomba ny olombelona fa ny fikambanan'ny AI vaovao dia mahatonga anao tsy mety maty, azonao atao ny manohitra ny sela, satria ireo fomba amam-panao voalohany dia manolotra ny AI vaovao (ao anatin'ny rafitra viriosy virus Luciferian ankehitriny)
Jereo ity fanazavana ity:
11 Jolay 2019 ao amin'ny 20: 07
Mijanona olana lehibe mba hahatakaran-tsaina sy ara-pihetseham-po ny zavatra tian'ny ankizilahy ao amin'ny script. Heveriko fa misy fikarohana fomba iray hiainana aorian'ny / fahafatesana amin'ny alàlan'ny famoahana ny / ny fahatsiarovanao amin'ny saka iray izay amboalin'ireo tovolahy amin'ny script. Eny, tena miezaka ny mandika ny Tompony izy ireo ary mety handositra an'i Lucifer / ny fahafatesana amin'ny alàlan'ny fifampizarana ho an'ny hafa matematika. Heveriko fa fohy ny fahitana azy io satria misy ny endriny noforonina noho ny fahasoavan 'ny rafitra / rafitra / paramètres izay mahatonga an'i Losifera / fahafatesana azo atao.
12 Jolay 2019 ao amin'ny 00: 11
Ho avy tsy ho ela, ny mpilalao sarimihetsika dia ho alefa lavitra kokoa noho ireo robots izay tsy mijaly amin'ny fifandraisana amin'ny fanahy miaraka amin'ny loharano (toy ny masoivohon'ny olombelona biolojika izay mbola misy), mba hahafahan'ireo avatars vao teraka izay manana fifandraisana amin'ny fanahy dia mbola tsara kokoa amin'ny mianatra mihaino ny fandaharan'asan'ny AI ary ny Luciferian Ai (izay mitantana io simulation io) dia mahazo fanaraha-maso bebe kokoa:
Fotoana izao hametrahantsika ny rafitra viriosy Rosiana.
12 Jolay 2019 ao amin'ny 03: 57
Heveriko fa ity simulation ity dia fahatarana (fahazavana). Ny zavatra hitanay dia zavatra taloha, noho izany dia afaka maminavina mora foana ny ho avy ianareo. Mankalaza izany isika satria voarakitra ao. Ny sarimihetsika matrice dia nafana be tamin'ny fomba maro. Any amin'ny farany, i Neo dia afaka mandao ny matiora, fa ny fitiavany sy ny fitiavany ny zanany dia mampody azy indray amin'ny lalao. Safidy sarotra raha mihevitra ianao fa voafetra ho ny olona ankehitriny. Andao handeha, dia afaka isika ary havotsotra. Tsy maintsy milaza aho fa sarotra amiko izany. Zavatra iray no azo antoka, tsy hanomboka fanentanana amin'ny artifisialy aho ary avy eo dia maty fa tsy mamerina mandrakizay ny amin'izany.
Azo antoka fa mankafy ny tsy fiandanian'ilay tany am-boalohany ary fantatr'ilay voalohany fa ny tantara dia ratsy.
Tsy maintsy nandinika izany isika mba hitazomana ny hoavy madio.
12 Jolay 2019 ao amin'ny 09: 29
Ny sarimihetsika matrix voalohany dia natao voalohany indrindra hampiseho fa ny matrices dia faribolana tsy misy ary tsara kokoa ny tsy manohitra. Io ihany koa dia nitodika nanodidina mpamonjy iray (Neo, ilay iray).
Sarimihetsika iray feno fahamarinana miaraka amina tora-po izay mahatonga antsika hino fa mila mpamonjy indray indray. Tsy ilaina izany. Ary tsy matory koa ny matriz. Rafitr'ity viriosy ity ary ny lehilahy miaraka amin'ny volombava fotsy (Lucifer, ilay mpanorina) dia mety ho tototry fotsiny ihany.
Ny zava-dehibe indrindra anefa dia ny fahitana fa tsy afaka miaina amin'ny simulation ianao. Ny tany am-piandohana dia eny ivelany ary mitandrina. Ny simulation dia tranga fitsapana. Ny simulation dia simulation. Ianao no tsy avatar ny vatanao.
12 Jolay 2019 ao amin'ny 09: 31
Raha fintinina: ny sarimihetsika izay tsy maintsy namorona ny matoatoa dia hoe tena mahafinaritra sy sarotra ny mandresy ity rafitra ity. Ilaina ny karazana superhero (Neo); Jesosy Kristy vaovao.
Tsia, tsy misy dikany. Raha vao tsaroanao hoe iza ianao no efa eo.
12 Jolay 2019 ao amin'ny 14: 43
Ny mpanaraka ny soratra dia mandroso amin'ny vokatra, raha manaraka ny tanjon'ny transhumanism isika dia lasa andevo farany.
Mipoaka nanoratra hoe:
15 Jolay 2019 ao amin'ny 04: 58
Tsara tarehy! Avy amin'ny fomba fijery ara-panahy, dia antsoin'izy ireo hoe fifohazana izany. Mifandraisa amin'io ampahany na ampahany amin'ny anao izay miaina / miaina amin'ny lafiny hafa. Ny tena marina, na inona na inona tianao omena azy. Izany koa dia karazana fampahatsiahivana momba ny hoe iza ianao. Misy ihany koa ireo olona izay resin-tory indray rehefa avy nifoha. Ary misy olona afaka miresaka momba izany satria mieritreritra izy ireo fa mahafantatra ny sasany amin'ireo foto-kevitra fa tsy mifoha amin'ny tena izy. Izay mahatsiaro fotsiny dia mahatakatra / mahita izany.
Tiako ny fomba ilazanao azy io, fainganana kokoa, saingy samy marina avokoa. Raha jereko izany, ny vahoaka tsy tia dia manampy ny hafa amin'ny fifohazany. Tsara tarehy fotsiny izy ireo fa ireo olona tsy misy tia dia manao 'zavatra fotsiny' fotsiny. (mandra-panesorana azy) Tsy fantany akory aza fa anisan'ny programa lehibe kokoa izy ireo. Mieritreritra aho fa ny mpanao politika sy ny vahoaka manerana izao tontolo izao dia tena tsy mahalala mihitsy ny lalao misy azy ireo. Izy ireo ihany no milalao ny anjara andraikitra (tsy fantatra). Afaka miaina araka ny fandaharana ihany izy ireo. Ity tontolo ity dia mitovy amin'ny tokony ho izy ary manao izay tokony hataony. Tsy misy fiovana. Raha tonga amin'ny fifohazana ianao na efa niaina izany, dia zava-dehibe amiko ny hamerina izany fifandraisana amin'ny tena maha-anao anao izany ary ny miaina izay tena izy. Azonao atao ihany koa ny manampy ny hafa amin'ny fifohazana.
15 Jolay 2019 ao amin'ny 10: 24
Ny ara-panahy dia mamaritra izany amin'ny lafiny iray, satria tamin'izany fotoana izany dia tsy mbola misy ny fahaiza-mandinika ara-teknika izay miaina ara-bakiteny amin'ny simulation. Ny sary dia afaka miova fo ara-bakiteny. Mijery ny vatantsika isika (amin'ny alalan'ity avatar ity) / milalao ao anatin'ity simulation ity.
Ny fanandramana isa roa dia mampiseho izany. Miasa toy ny ordinateran'ny ordinatera koa izao rehetra izao. Isika dia "miaina" amin'ny lozam-pifamoivoizana (Luciferiana).
« Ny mari-pankasitrahan'ny banky Deutsche Bank dia namoaka voalohany ny fisamborana aloha?
Q Anon, fanambarana Epstein, ny fifandraisan'i Clinton, ny 'fiarahamonina marina': mbola tsara ihany izany! »
Total visits: 16.080.573